Company Profile - Mitsangàna (Tianjin) Steel Sales Co., Ltd
Company teny faneva: NY TSARA INDRINDRA VOKATRA dia avy RISE vy
Company fahaizana: Ny orinasa manaraka ny ny fitsipiky ny "Quality no laharam-pahamehana, fitantanana no tena ilaina". Ny orinasa efa mahafeno fepetra ny ISO9001: 2008, API taratasy fanamarinana, fanamarinana Vondrona Eoropeana, tamin'ny taona fanamarinana. China fanasokajiana fiaraha-monina taratasy fanamarinana ny rafitra fitantanana taratasy fanamarinana kalitao, ny fiaraha-monina Sina fanasokajiana orinasa alalana taratasy fanamarinana.
Company Service: Mitsangàna no fitaovana amin'ny maro iraisam-pirenena mandroso famokarana tsipika sy manokana fitaovana ny vy sodina anti-harafesiny, mahatonga azy ho afaka horaisintsika, isan-karazany ny vy sodina anti-harafesiny injeniera toy ny tokan-tena, ary avo roa heny Fusion nampikambana epoxy (FBE) vovoka coating. Double polyethylene (2Pe) sy 3PE coating, avo roa heny polypropylene (2PP) coating, 3PP ivelany coating, ary anatiny sy ivelany coatings plastika. Ankoatra izany, ny orinasa afaka sodina koa ny akanjo vy amin'ny anti-harafesiny loko anisan'izany IPN8710 tsy misy poizina coating amin'ny manda vy sodina, epoxy arintany tara coating, epoxy resin coating, ary ny rihitra simenitra soson'ny.
Mametraka ny mpanjifa voalohany, ary naka tahaka ny kalitao aina. Nampiasa ny orinasa famokarana zokiolona injeniera amin'ny traikefa sy nametraka fepetra arahana amin'ny fivarotana mialoha, in-fivarotana sy Ankehitriny-fivarotana tolotra. Tsy manatanteraka ny toetra ankapobeny amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny dingana rehetra mba hahatonga ny vokatra sy ny tolotra azo antoka kokoa, fanorenana ny fiaraha-miasa mandritra ny fotoana maharitra, ary mifanohitra izy mahasoa ny fifandraisana amin'ny mpanjifa.